डा. केसीलाई निमोनिया, तत्कालै आइसियू चाहिने तर इलाममा छैन – Health Post Nepal
डा. केसीलाई निमोनिया, तत्कालै आइसियू चाहिने तर इलाममा छैन
२०७५ पुष ३० गते १९:५१
६ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको फोक्सोको दायाँतर्फ निमोनिया संक्रमण देखिएपछि चिकित्सकहरूले तत्काल आइसियूमा राखेर एन्टिबायोटिक्स चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
अस्पतालमा उपचार सुरु गरेकै दिन विभिन्न परीक्षणपछि चिकित्सकहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. केसीको जीवन जोखिममा परेको भन्दै तत्काल आवश्यक पहलका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् । चिकित्सकहरूले इलाममा आइसियू नभएकाले तत्काल उपचार सुविधा भएको अस्पतालमा पुर्याएर उपचार थाल्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
उनले मुटुको चाल नियमित गर्ने औषधि र निमोनियाका लागि एन्टिबायोटिक्स लिन आग्रह गरे पनि डा. केसीले इन्कार गरिहेको बताए । ‘हाम्रो आग्रहमा उहाँले नर्मल स्लाइन र अक्सिजन मात्रै लिन मान्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले त एन्टिबायोटिक्स नै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था हो ।’
अस्पतालका मेडिकल सुपरिपेन्डेन्ट डा. बीजेन्द्रकुमार साहका अनुसार फोक्सोमा निमोनिया र घाँटीमा संक्रमणसमेत देखिएको छ । ‘त्योभन्दा पनि चुनौतीपूर्ण र चिन्ताजनक कुरा भनेको उहाँको मुटुको चाल अनियमित भइरहेको छ,’ डा. साहले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘एकैपटक ३० मा झर्छ र बढेर २४० पुग्छ ।’
इमर्जेन्सी ड्रग तयारी अवस्थामा राखिए पनि होस हुँदासम्म नचलाउनू भन्ने डा. केसीको आग्रहअनुसार इच्छाविपरीत चलाउन नमिल्ने डा. साहले बताए । ‘सुगर निकै कम छ, रोगसँग लड्ने क्षमता घटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘उमेरका आधारमा पनि निमोनिया देखिएपछि निकै डराउनुपर्ने अवस्था हो ।’
डा. साहका अनुसार मुटुको चालसँगै, रक्तचाप घटेको छ, पल्स पनि अनियमित छ । पिसाबको मात्रा घटेको छ । निरन्तर खोकीसमेत लागिरहेको छ । महत्वपूर्ण सूचकहरू रक्तचाप ९०/६० छ भने अक्सिजनको मात्रा ८९ छ ।
डा. गाविन्द केसी
सरकारी चिकित्सक संघको बागमती शाखाको नेतृत्वमा डा. त्रिभुवन चन्द्र झा
निजामती अस्पतालका चिकित्सकले दिए १० दिने अल्टिमेटम, माग पुरा नभए आन्दोलनमा
डा. प्रदीप ज्ञवाली विपद न्युनिकरण राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित
शुक्रबार २५ हजार ४९७ जना सक्रिय संक्रमित, १० जनाको निधन
कोरोना महामारी : नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाउन बेलायतसँग माग